France na -akwado nkwado mmiri ozuzo acid sitere na Canary Islands
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » France na -akwado nkwado mmiri ozuzo acid sitere na Canary Islands
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Resorts • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Sustainability News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mgbawa nke ugwu mgbawa dị na Cumbre Vieja National Park na Sọnde emeela ka ndị bi na agwaetiti La Palma 6,000 hapụ ụlọ ha. Dị ka mmelite sitere na Ọrụ Nchịkwa Mberede Copernicus na Tọzdee, ụlọ 350 emebiwo, ebe mmiri na -asọba gafere hectare 166.
A ga -akpọrọ sọlfọ dioxide gafee France na efere Mediterenian na ngwụcha izu a.
Oke njupụta nke igwe ojii sọlfọ dioxide ga -agbago elu site na 1,000 ruo 3,000 mita.
Canary Islands Volcanology Institute emeela atụmatụ na mgbawa nke ugwu mgbawa Cumbre Vieja nke mepụtara sọlfọ dioxide nwere ike ịdị “n'etiti ụbọchị 24 ruo 84”.
Keraunos, oke ifufe nke France na onye na -ahụ maka oke mmiri ozuzo, taa kesara eserese sitere na mmemme Copernicus EU na -egosi na sọlfọ dioxide, nke sitere na mgbawa ugwu mgbawa nke Canary Islands na nso nso a, ga -agafe France na efere Mediterenian na ngwụcha izu a. Oke oke igwe ojii ga -agbago elu site na 1,000 ruo 3,000 mita.
France a na -atụkwa anya na mpaghara Mediterenian ga -enwe mmetụta nke mgbawa ahụ, ebe igwe ojii juputara na sọlfọ dioxide na -arịgo na Europe, na -eme ka mmiri ozuzo dịtụ ntakịrị acidic.
The Canary Islands Ụlọ ọrụ mgbawa ugwu (Involcan) emeela atụmatụ na mgbawa nke ugwu mgbawa Cumbre Vieja nke mepụtara sọlfọ dioxide nwere ike ịdị “n'etiti ụbọchị 24 ruo 84”.
Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, sọlfọ na -emeghachi na ikuku mmiri dị na mbara igwe na nke na -enye acid sọlfọ, ihe na -emepụta mmiri ozuzo acid. N'ihi nke a, mmiri ozuzo n'ime ụbọchị ndị na -abịanụ ga -adị acidic karịa ka ọ na -adị na mpaghara ndị emetụtara.
Sọlfọ dioxide nwere ike imetụta gburugburu ebe obibi yana ahụike mmadụ, na -akpasu ngụgụ na anya iwe. Onye, agbanyeghị, kọrọ na ihe ahụ agaghị adị ike n'ihi na a na-agbasasị ihe ndị ahụ nke ọma.
The mgbawa nke ugwu mgbawa nke dị na Cumbre Vieja National Park na Sọnde amanyela ndị bi na agwaetiti La Palma puku isii ịhapụ ụlọ ha. Dị ka mmelite sitere na Ọrụ Nchịkwa Mberede Copernicus na Tọzdee, ụlọ 6,000 emebiwo, ebe mmiri na -asọba gafere hectare 350.
Mgbawa mgbawa ọhụrụ pụtara n'abalị Mọnde n'ụtụtụ Mọnde Agwaetiti Canary nke Spanish mgbe e debanyere aha ala ọma jijiji 4.1, na -emepụta ọtụtụ lava ma kpalie ndị bi n'àgwàetiti 500 ịpụ. Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ anọwo na -arụ ọrụ ịwapụta ugwu mgbawa site n'oké osimiri n'ihi na njikọ dị n'etiti mmiri na mmiri nwere ike ịmepụta anwụrụ ọkụ.